Ngalaba Wear gam akporo kwụsịrị na ụlọ ahịa Google | Akụkọ akụrụngwa
Akụrụngwa, ngwaike na ihe ndị ọzọ. Nke ahụ bụ echiche Google mere ụbọchị ọzọ na mmemme ahụ ebe o gosipụtara Pixels ọhụrụ, ndị ọkà okwu nwere ọgụgụ isi na ekweisi ọhụrụ, niile n'okpuru akara 'nke Google' mere. Companylọ ọrụ ahụ ekwughị banyere ihe ndị e kere eke na gam akporo n'oge ọ bụla, na-egosi nke ahụ Ọ bụghị oge ime ya ma ọ bụ na maka oge ọ na-ahọrọ ilekwasị anya n'ihe ndị ọzọ.
Otu ụbọchị mgbe ngosi ahụ gasịrị, ihe ọ bụla na-ezo aka na gam akporo Wear akwụsịla kpamkpam na ụlọ ahịa Google, mmegharị nke na-adọta ọtụtụ nlebara anya na nke ahụ na-echegbu ndị nrụpụta na-aga n'ihu ịkụ nzọ na sistemụ arụmọrụ a, nke niile ma e wezụga Samsung.
Ruo afọ ole na ole, Samsung kpebiri ịbanye Android Wear kpamkpam iji jikwaa smartwatches ya na Tizen, Sistemụ arụmọrụ maka ngwaọrụ nkwojiaka egosiri na ọ na-enye nnwere onwe na arụmọrụ karịa sistemụ arụmọrụ Google maka wearables, sistemụ arụmọrụ nke ghọgoro nke atọ eji eme ihe karịa Apple's watchOS na Samsung's Tizen.
Tupu mwepu nke ngalaba a, n'ime ya anyị nwere ike ịchọta LG Watch Style na LG Watch Sport, ụdị ndị bụ ndị mbụ natara gam akporo Wear 2.0, sistemụ arụmọrụ nke were ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu afọ iji rute ahịa na nsụgharị ikpeazụ ya kemgbe Google webatara ya, na-egosi ọzọ na Android Wear yiri ka ọ bụrụ nke abụọ ma ọ dịkarịa ala ugbu a.
N'oge ahụ, anyị amaghị ma ụlọ ọrụ ahụ ọ na-ezube ịmalite smartwatch ọhụrụ na Wear gam akporo ejiri akara "emere na Google", mana enwere ike ọ bụrụ na ọ nwere atụmatụ ime ya, ọ gaara echere ka mwepụta ya wepu ụdị ndị ahụ. nke LG ndị dị n'ụlọ ahịa gị. N'oge a Storelọ Ahịa Google na-enye anyị edemede ndị a: Ekwentị, andlọ na ntụrụndụ, Talbets, Virtual Reality na Ngwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Akụkụ gam akporo Wear na-apụ n'anya ụlọ ahịa Google